LGD3303 ntụ ntụ (1196133-39-7) hplc ma98% | AASraw SARMS ntụ ntụ
LGD3303 ntụ ntụ (1196133-39-7)
/ ngwaahịa / SARMS / Ntụ ntụ LGD3303 (1196133-39-7)
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke LGD3303 ntụ ntụ (1196133-39-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
LGD3303 ntụ ntụ bụ onye na-emepụta ihe na-emepụta androgen receptor modulator (SARM) iji gbochie mgbu ahụ, na-emeso Osteoporosis, na-eme ka ahụ ike dịkwuo elu ma nyere ndị agadi aka ịnọgide na-enwe ume na anụ ahụ. Ọ bụghị steroid, ọ na-ekwu okwu ọnụ.
LGD3303 ntụ ntụ video
LGGH3303 ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: LGD3303 ntụ ntụ
Molekụla Formula: C16H14ClF3N2O
Ọbara arọ: 342.74
Melt Point: 70-74 ° C
Raw LGD3303 ntụ ntụ na abụba ọnwụ
Raw LGD3303 ntụ ntụ
Raw LGD3303 ntụ ntụ Usage
LGD3303 ntụ ntụ bụ onye na-emepụta androgen receptor modulator (SARM) nke na-abịa na bioavailability obụl impeccable. A na-ahazi ọgwụ ahụ dị ka onye na-ahọpụta agonist maka ndị na-enweta androgen receptor. LGD3303 ntụ nwere ma mmetụta anabolic na androgenic na n'oge a na-eme nnyocha ọgwụ ahụ dị ka ihe ngwọta ga-agwọta osteoporosis. Nke a bụ ọnọdụ nke na-eduba n'adịghị ike ọkpụkpụ nke ụmụ mmadụ. LGD3303 raw ntụ ntụ bụ otu n'ime SARM kachasị ike n'ebe ahụ na maka ọtụtụ bodybuilders chọrọ ịmalite ahụ ike, LGD3303 ntụ ntụ kwụlitere na ndị ọzọ dị irè SARM nwere ike ịnye njedebe kachasị.
A ghaghị imezi ọgwụ
Mgbucha - Njikere maka ntụ ntụ LGD3303 ka na-ege ntị dị ka nnyocha gbasara ọgwụ ahụ na-aga n'ihu. Otú ọ dị, maka nnukwu mmetụta na ịcha, a na-atụ aro usoro ọgwụ dị n'etiti 15 mg na 20 mg maka oge 6 ruo 8 izu.
Bulking - LGD3303 ntụ ntụ nwere mmetụta dị ịtụnanya na ịmepụta ahụ ike na iji nweta nsonaazụ, ị ga-achọ nhazi usoro nke 20 mg na 30 mg kwa ụbọchị maka oge 8-10 ga-aga.
Recomping - Otu usoro onu ogwu a ga-aru oru iji rekota. 20 mg na 30 mg maka oge nke 8-10 izu ga-eme. Otú ọ dị, dị ka nyocha na LGD3303 raw ntụ ntụ na-aga n'ihu, ihe ọmụma usoro nwere ike ịgbanwe.
Ụmụ nwanyị hà nwere ike iji ya mee ihe?
Ee, ụmụ nwanyị nwere ike iji ntụ ntụ LGD3303. Cheta na nke a abụghị hormoni ma ọ bụkwa ọgwụ na-abụghị nke steroid nke enweghị mmetụta na akụkụ orrogenic. Ihe ize ndụ nke ịbụ onye na-amaghị nwoke bụ ihe efu.
Ụdị Nsonaazụ M Kwesịrị Ịtụ Anya na LGD3303 ntụ ntụ
LGD3303 ntụ ntụ adịghị eme ka ọkpụkpụ ventral na-eto eto dị elu karịa ụba nke plasma concentrates. A nọgidere na-ahọrọ ụdị anụ ahụ mgbe a na-eji ụrọ LGD3303 mee ihe n'usoro maọbụ site na-aga n'ihu n'ihu, ụzọ abụọ nke nlekọta na oge dị iche iche na profaịlụ. N'agbanyeghi ihe kachasị na-eme ka ọ bụrụ ọrụ prostate, ụbụrụ dị iche iche nke LGD3303 bụ ntụ ntụ dị elu karịa prostrate karịa na levator ọbụna muscle. LGD3303 ntụ ntụ nwere SARM Njirimara nke nwere onwe ya na profaịlụ pharmacokinet, na-atụ aro na ụkpụrụ usoro maka anụ ahụ-nhọrọ nhọrọ bụ nsonaazụ mmekọrịta nke molecular na ọkwa nke androgen receptor.
LGD3303 raw ntụ ntụ, mgbe ọ na-adị ukwuu anabolic, na-egosipụtakwa otutu ihe ọ na-ebu n'ime androgenic, ọ pụkwara inwe ike ime ka ụfọdụ n'ime mmetụta ndị na-agwọ ọrịa steroid nwere mmetụta (bụ ma ọ bụ ntutu isi na ihe otutu, na ụdị ụfọdụ nke mmekọrịta na prostate). Ma ọ dịkarịa ala, nke ahụ bụ ihe anyị nwere ike ịdaba na ọmụmụ ruo n'oge. Otú ọ dị, ndị ọrụ ole na ole egosiwo ụdị mmetụta ndị ahụ, ọ bụ ezie na mmebi nke nsụmkpụ nke hormone (testosterone, wdg ...) yiri ka ọ dị njọ na LGD3303 ntụ ntụ. SARM a nwere aha ọma nke SARM kachasị mma (ntụgharị nke ga-agbakwunye njirimara dị ukwuu), ma dịka iji atụnyere SARM na steroid nke anabolic, nke a nwere ike ịbụ nke kachasị nso na nchọta.
Ịdọ aka ná ntị na LGD3303 ntụ ntụ
PCT ọ dị mkpa
Ka ọ dị ugbu a, nchọpụta nchọpụta egosiwo na ọbụna dị ka LGD3303 raw ntụ ntụ na-enye mmetụta na-arụpụta etrogenic impeccable, ọ naghị emetụta akụkụ androgenic na ahụ. Nke a pụtara na ọ gaghị emetụta mmepụta nke mkpụrụ ndụ nke testosterone ma ya mere PCT agaghị adị mkpa.
Ọkara ndụ nke LGD3303 ntụ ntụ bụ n'oge 12 awa. Nke a pụtara na ị ga-eji usoro onu ogwu a kwuru ugboro abụọ n'ụbọchị maka nsonaazụ kacha mma.
LGD3303 raw ntụ ntụ bụ SARM nke na-anaghị ahụ anya nke na-egosi na ọ ga-enwe ike ịmalite ikpo okwu muscle na BMD na ụdị oke. Mgbe a na-etinye aka na rats na-emepụta na eriri na androgen, onyinye a emeghị ka ọkpụkpụ ventral na-akpali ya n'agbanyeghị na ọ na-amụba usoro onunu. Nchọpụta ndị a na-egosi na onyinye a anaghị emetụta akụkụ androgenic, nke bụ akụkụ nke SARM anabolic dị mma.
Ndị nchọpụta ahụ na-etinyekwa ụzọ abụọ dị iche iche, na-ekwu okwu ọnụ ma na-aga n'ihu, na-achọpụta na akụkụ ahụ dịkwuo ụbụrụ na-eme ka ọkpụkpụ ahụ pụta ma enwere ya n'ọtụtụ dị elu na prostate. Ọ bụ ihe mgbagwoju anya na ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ dị elu nke onyinye ahụ dị na prostate ahụ, uru ahụ na-aza ma na-etolite, karịa akụkụ androgenic.
Uru nke iji ntụ ntụ LGD3303
Ọ bụ ezie na ntụle LGD3303 ka bụ SARM ule, enwere uru ole na ole ọ ga-enye. Iji malite, LGD3303 ntụ ntụ nwere ike ịnye arụmọrụ androgenic dị irè na-enweghị mmetụta nke akụkụ androgenic. Nke a bụ nnukwu gbakwunyere n'ihi na e jiri ya tụnyere ndị steroid nke e ji mee ihe n'ọnọdụ mbụ maka SARM, mmetụta ndị ahụ dị ntakịrị.
LGD3303 ntụ ntụ nwere ike inyere aka na ụkwara muscle na ọkpụkpụ. Maka bodybuilders, nke a bụ akụkụ dị oké mkpa. Ọ bụ ezie na ndị SARM kacha mma ka ha ga-emetụta ịzụlite ahụ ike, na ule ndị a mere ugbu a, LGD3303 raw ntụ ntụ dị irè.
A hụkwala ntụpọ LGD3303 ka enwe mmetụta dị mma iji meziwanye ihe omume metabolic. Nke a dị ịrịba ama n'echiche bụ na ndị chọrọ ịkpụ abụba nwere ike ịme ihe na SARM dịka enyemaka iji nweta ihe mgbaru ọsọ ha na-abaghị uru. Otú ọ dị, ịkwado LGD3303 raw ntụ ntụ na ndị ọzọ SARM dị oke mma ma nwee usoro mmega ahụ dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na a ga-arụpụta ihe.
Ọghọm dị na iji ntụ ntụ LGD3303
LGD3303 ntụ ntụ ka na-arụ ọrụ n'oge ikpe ahụ ya mere ọ dịghị mfe ikwu ma enwere mmetụta ọ bụla ma ọ bụ. Otú ọ dị, ruo ugbu a nyochaa ọgwụ ahụ na mmetụta ya na ụmụ oke egosila na o nwere mmetụta dị nta na akụkụ androgenic.
LGD3303 Kaacha Powder
LGD3303 ntụ ntụ Marketing
Esi zụta LGD3303 ntụ ntụ si AASraw
LGD3303 Ntụziaka ntụ ntụ ntụ ntụ
1 nyochaa maka LGD3303 ntụ ntụ (1196133-39-7)
LGD3303 ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi